ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ – အပိုင်း (၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ကံကောင်းစေသော နံပါတ် ၉
မြန်မာပြည်မှာ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ အချိန်ကာလတခုမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းငွေစက္ကူတွေကို သုံးခဲ့တာရှိပါတယ်။ ငွေအမ်းရ၊ လဲရတာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့ ၄၅ ကျပ်တန်၊ ၉၀ တန် ငွေစက္ကူတွေပါပဲ။
ပြန်ကြည့်ရင် ၄၅ ကျပ်တန်ရော ၉၀ တန်ရော ၉ ကနေ အဆတိုးသွားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပါပဲ။ ၉ ငါးလီ ၄၅၊ ၉ ဆယ်လီ ၉၀၊ ဒီလိုပါ။ လေ့လာသူတွေကတော့ ဒီလို ဂွကျကျ ငွေစက္ကူတွေကိုထုတ်ဖြစ်ဖို့ ဗေဒင်ဆရာတွေက နောက်ကွယ်ကနေအကြံပေးတာလို့ ဆိုကြပါတယ်၊ ဗေဒင်ဆရာတွေဟာ မြန်မာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်တွေ တခုခုမလုပ်ခင် ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးတဲ့နေရာ၊ အရပ်မျက်နှာ ရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေရွေးတဲ့ အခါမျိုးမှာ အခါတော်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပါတယ်။ ၉ လပိုင်း ၁၈ ရက်နေ့ဖြစ်လို့ ၉ ကနေ အဆတိုးသွားတဲ့ဂဏန်းတွေပါပဲ။ ကိုးဂဏန်းကတော့ မြန်မာတွေအတွက် ကံကောင်း တဲ့နံပါတ်ဖြစ်နေတာ ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော် ၉ ပါးနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။
“မြန်မာပြည်က ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စတွေမှာ ဗေဒင်ကိုအားကိုးကြတယ်” လို့ တိုကျိုတက္ကသိုလ်၊ ယဉ်ကျေးမှု မနုဿဗေဒဌာန (cultural anthropology) ပါမောက္ခ ကီကို တိုဆာ (Keiko Tosa) က ဆိုပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရခါစက အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်း
ဂျပန်ခေတ် စစ်ဌာနချုပ်ကို ပြန်အသုံးချခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ အရှေ့နဲ့အနောက်သွယ်တန်းနေတဲ့ တောင်တန်းရှိပါတယ်။
နေပြည်တော်က စစ်ရေးအမြင်အရ သဘာဝခံတပ်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများဟာ န၀ရတ်လက်စွပ်ကို ၀တ်ကြပါတယ်။ ပတ္တမြားက အလယ်က၊ စိန်အပါအ၀င် တခြားရတနာ ၈ မျိုးက ဘေးကနေ ၀ိုင်းရံထားတဲ့ လက်စွပ်ပါ။ ကံကောင်းမယ်။ အဆိုးတွေနဲ့ ကင်းဝေးမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြန်မာပြည်ကပေးစာတခုမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ နံပါတ်ကိုးအပေါ်ယုံကြည်ကြတဲ့ကိစ္စဟာ လူရယ်စရာ၊ ခပ်ညံ့ညံ့ပြက်လုံးတခုပါပဲလို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ နံပါတ် ၁ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက မြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ အမိန့်ပေး လိုက်တာလည်း ဗေဒင်ရဲ့အလိုအရပဲလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မြို့တော်သစ်ကိုမပြောင်းရင် စစ်အစိုးရ ပျက်စီးကိန်းဆိုက်မယ်ဆိုတဲ့ လက်စွဲတော်ဗေဒင်ဆရာရဲ့အလိုအရ ပြောင်းသွားတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ပညာတတ်တယောက်က “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ခေါင်းကို ဆင်နင်းတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တယ်၊ အဲဒီအိပ် မက်ကို အခါတော်ပေးဗေဒင်ဆရာက အတိတ်ကောက်တော့၊ ဒါဟာ ကံဆိုးမယ့်နိမိတ်ပဲ။ မြို့တော်ကို ပြောင်းမှဖြစ်မယ်လို့ အကြံပေးတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုကောလဟလတွေကို ဘယ်သူကစဖြန့်သလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်း ရွှေဟာ မိန်းမကြောက်သူဖြစ်ပြီး ဗေဒင်ကို အလွန်အကျွံယုံတဲ့ သူ့မိန်းမပြောသမျှ လိုက်လုပ်နေရတာဆိုတဲ့ ကောလဟလမျိုးတွေလည်းရှိပါ တယ်။
နေပြည်တော်မှာ ကျနော်တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်ကမန်နေဂျာ အမျိုးသမီးရဲ့အဖေက စစ်တပ်ကအရာရှိလို့ ပြောကြပါတယ်။ နေပြည်တော်ကို ပြောင်းလာတာ ဗေဒင်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိသလားလို့မေးကြည့်တော့ သူက “ဗေဒင် – ဟုတ်လား” လို့ သံယောင်လိုက်ပြောရင်း နေပြည်တော် မြေပုံကို ဖြန့်လိုက်ပါတယ်။ မြေပုံပေါ်က လမ်းမကြီးတွေကို လိုက်ရေတွက်ကြည့်တော့ လမ်းမကြီး ၉ သွယ်ကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မန်နေဂျာအမျိုးသမီးကတော့ စစ်ရေးအမြင်က အဓိကကျတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ်မှာလည်း နေပြည်တော်ဟာ စစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်ဖူးတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရခါစက အစိုးရကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်း ဂျပန်ခေတ် စစ်ဌာနချုပ်ကို ပြန်အသုံးချခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ အရှေ့နဲ့အနောက်သွယ်တန်းနေတဲ့ တောင်တန်းရှိပါတယ်။ မြစ်တွေက ၀ိုင်းရံနေပါတယ်။ နေပြည်တော်က စစ်ရေးအမြင်အရ သဘာဝခံတပ်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မတ်လမှာ ရာထူးက အနားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ လက်ရှိသမတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တခြားအရာရှိတွေဟာ တောင်တန်းကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ အိမ်တွေ အသီးသီးဆောက်ပြီး နေကြပါတယ်။ အရှေ့ဘက်က လွင်ပြင်အထိပေါက်တဲ့ မြေအောက်လှိုင်ခေါင်းတွေကလည်း တော်တော်များများ တူးထားကြတယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေက မြေအောက်လှိုင်ခေါင်း ဆောက်နေဆဲဆိုတာ အသေအချာယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ကောလဟလမျိုးစုံထဲမှာ နယူးကလီးယား စီမံကိန်းအတွက်ဆောက်တယ်ဆိုတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အီရတ်သမတဟောင်းရဲ့နာမည်က ဆာဒမ်ဟူစိန်ပါ။ စိန်ဆိုတာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနာမည်ကတော့ ရွှေနဲ့ဆုံးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အီရတ်ကို အမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ “စိန်ပြီးရင် ရွှေအလှည့်လာမယ်” ဆိုတဲ့ ကောလဟလတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကောလဟလကြောင့် မြန်မာပြည်က ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှား သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လို့ အမေရိကန်နဲ့ မဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအတွက် အမေရိကန် တပ်တွေဝင်တိုက်မှာကို ထိတ်လန့်သွားပုံရပါတယ်။
မြန်မာပြည်အနှံ့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်း တက္ကသိုလ်တွေကို တနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာ အများကြီးကို တွေ့ရမှာပါ။ အရင်တုန်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်လောက်ရှိရာကနေ အခုတော့ မြို့ငယ်တွေအထိ တက္ကသိုလ်တွေရှိလာပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကျောင်းသားတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုပေါ် ပေါက်ခဲ့ပြီးကတည်းက အာဏာပိုင်တွေက တက္ကသိုလ်တွေကို ဒေသအလိုက် သီးခြားစီဖြစ်အောင် ခွဲထုတ် လိုက်လို့ပါပဲ။
“တက္ကသိုလ်တွေကို အခုလိုခွဲလိုက်ရတာ အတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါဝင်မလာရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ထားလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါပဲ။ တက္ကသိုလ် ပညာရေးအရည် အသွေးတွေကျဆင်းကုန်ရင် တိုင်းပြည်လည်း ပျက်လောက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မြို့တော်ကိုပါ ပြောင်းရွှေ့ လိုက်တာကတော့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ အစိုးရယန္တရားကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိ ခိုက်စေလောက်တဲ့အထိ မငြိမ်သက်မှုတွေလုပ်မလာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအတွက် အစိုးရက အဆုံးစွန် လုပ်ဆောင်ချက်ပဲ။” လို့ ရန်ကုန် အိုင်တီကုမ္ပဏီတခုက ဥက္ကဌက ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်က နာမည်တော်တော်များဟာ ပါဠိအမည်တွေချည်းပါပဲ။ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသား တွေအပါအ၀င် အများစုသက်ဝင်ယုံ ကြည်ကြတဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ သာသနာ့ဒါယိကာမင်းတွေကို လေးစားသမှုပြုတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နေပြည်တော်က စစ်တပ်နယ်မြေမှာ လေးစားလောက်တဲ့ မြန်မာဘုရင်ကြီး သုံးပါးရဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကလည်း မင်းတွေစံမြန်းရာဌာနဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။
“နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ ခေါ်တွင်စေတာကတော့ ဘုရင်ခေတ်ကို ပြန်အသက်သွင်းတဲ့ သဘောပါပဲ”လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာဘုရင်တွေခေတ်တုန်းကလည်း ဘုရင်တပါးနန်းတက်တိုင်း မင်းနေပြည်တော်လည်း ပြောင်းတတ် တဲ့အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ မြန်မာစစ် တပ်က ခေါင်းဆောင်အတော်များများက ဗမာလူမျိုးတွေကများပြီး၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေက ဗမာတွေကြီးစိုးထားတဲ့ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်စိန်ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတော့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေက ခြယ်လှယ်နေကြပါတယ်။ မြို့တော်ကိုပြောင်းလိုက်တာကိုကြည့်ရင် ဗမာလူမျိုးတွေက နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကို တခြားတိုင်းရင်း သားတွေလက်ထဲကို ဘယ်တော့မှထည့် မပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
နေပြည်တော်အခြေစိုက် သံတမန်တဦးကတော့ မြန်မာအစိုးရထဲက ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေက ခပ်ညံ့ညံ့ လူတွေမဟုတ်ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။ မြို့တော်ကို မဟာဗျူဟာ ရှုထောင့်၊ အကျိုးသင့် အကြောင်း သင့်စဉ်းစားပြီးမှ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်၊ သူ တို့စဉ်းစားတဲ့ အကြောင်း ပေါင်းများစွာထဲမှာ ဗေဒင်ကိန်းဂဏန်းတွေလည်းပါမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု တွေထဲမှာလည်း ဗမာလူမျိုးက အများစုပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ ၈ လေးလုံးနေ့မှာ အထွေထွေသပိတ်ကြီး ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လူထုကို ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းပြောတဲ့နေ့ကလည်း သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာဖြစ်နေပါတယ်။ ၂ နဲ့ ၆ ပေါင်းရင်လည်း ၈ ပဲ ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျုိးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ဗဟိုကော်မတီဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေကို အတိုက်အခံတွေ အတွက် ၈ ဂဏန်းက ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်လားလို့ မေးကြည့်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်ဆွေက ၈ ဂဏန်းဆိုတာက ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်း၊ ဘုရင်တွေခေတ်တုန်းက နိမိတ်မကောင်းတဲ့နံပါတ်လို့ အယူရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ၈ ဂဏန်းကိုသုံးပြီး အစိုးရကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာလို့ ပြောပြပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ၉ ဂဏန်းအပေါ် ယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရယ်စရာလို့သဘော ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံတွေကိုယ်တိုင်ကျတော့လည်း ၉ ဂဏန်းသမားအစိုးရကို ခြိမ်းခြောက်ဖို့ ၈ ဂဏန်းကို အသုံးချနေတယ်ဆိုတာကတော့ ကြားလူတွေရဲ့ အမြင်မှာ လူရယ်စရာပဲမဟုတ်ပါလား။
Myanmar’s military government obsessed with fortune telling and ‘lucky’ number 9
(Mainichi Japan) January 21, 2012
Strange banknotes were used at one point in Myanmar while the country was under military rule. The bills, whose face values were 45 and 90 kyats, were apparently inconvenient for consumers in Myanmar.
Both figures areamultiple of nine, and observers believe that fortune-tellers were involved in the decision to issue these bills. Fortune-telling is often used to select the best date, direction and figure to take some action.
In 1988, Myanmar’s military stagedacoup on Sept. 18, both the month and date are multiples of nine.
“The figure nine is regarded as lucky in Myanmar as people associate the number with the nine virtues of Buddha,” says Keiko Tosa, professor of cultural anthropology at Tokyo University of Foreign Studies. “Fortune-telling is popular among top military leaders there as what happens inamoment can lead to their death.”
Many prominent figures in Myanmar weararing with nine different jewels, witharuby in the center surrounded by eight other jewels includingadiamond, in the hope that the rings will bring good luck and expel evil.
Aung San Suu Kyi wrote in her column, “Letter from Burma,” in the Mainichi Shimbun, “The importance that political leaders attach to the figure nine isabit of joke,abad joke.” The top leader of the military regime, Than Shwe, gave the green light to the relocation of the capital. Widespread speculation that he decided to shift the capital according to the results of fortune-telling is based on rumors that he had been warned by his personal fortune-teller that his military regime would collapse unless he relocated the capital.
An intellectual living in Yangon said, “He hadanightmare that his head was trampled on by an elephant. After that, his fortune-teller advised him to shift the capital because his nightmare wasasign that something unlucky would happen.”
One cannot help but wonder who spread such rumors. Other rumors have it that Than Shwe isahen-pecked husband and followed advice from his wife who was immersed in fortune-telling.
In Naypyidaw, I stayed atahotel managed byawoman, whose father is reportedlyamilitary officer. I asked her whether the capital of Mynmar was shifted to Naypyidaw based on fortune-telling.
She said, “Fortune-telling?” and spread outamap of the city. The signs of rotaries particularly stood out on the map, so I counted their number and confirmed that there were nine rotaries.
However, the hotel manager pointed out that the capital was relocated mainly for military reasons.
“Japanese forces at one point set upacommand post in Naypyidaw. After winning independence, the Communist Party of Burma, which launched an anti-government struggle, took over the facility as their own base. A mountain range is situated from east to west in Naypyidaw, and there are rivers that are suitable for defending the area. In other words, Naypyidaw isanatural fortress,” she explained.
Than Shwe, who retired from politics in March, President Thein Sein and other dignitaries have built their residences before the eastern part of the mountain range and have reportedly dug several tunnels that lead to an eastern plain. Intelligence agencies from various countries are certain thatalarge-scale secret tunnel is under construction in Myanmar, sparking various speculation, including that it is for nuclear facilities.
“Shwe” isaBurmese word that means gold. “Sein,” part of the name of former Iraqi President Saddam Hussein, means diamond. After the United States attacked Iraq, rumors spread in Myanmar that “after diamond, the next target of the U.S. is gold.” Than Shwe, who provoked Washington by suppressing pro-democracy forces, may have feared an attack by U.S. forces.
If you travel around Myanmar, you will notice there are many universities across the country, even in small cities, although the University of Yangon and the University of Mandalay had previously been the only general universities. This is because authorities have split universities into regional entities since the student-led pro-democracy campaign gained momentum in 1988.
“The split of universities is aimed at preventing excellent students from being involved in the pro-democracy campaign. A decline in the quality of education at universities could destroy the country. The relocation of the capital is an ultimate measure to maintain order by splitting students and public servants to prevent any unrest from adversely affecting government functions,” laments the president of an IT company in Yangon.
Do Pro-Democracy forces regard the number ‘8’ as lucky?
Most of the names of areas in Naypyidaw come from words of the Pali language, which isalanguage used in the sutra of Theravada Buddhism that many people in Myanmar, including ethnic Burmese, believe in. This may reflect the government’s respect for the Burmese dynasty that protected Buddhism. In the military district of the city are large statues of three respected Burmese kings. Naypyidaw means the capital ofakingdom.
“Naypyidaw literally means the restoration of the Burmese dynasty,” says Khin Maung Swe, leader of the National Democratic Force.
In the era of the Burmese dynasty, there wasacustom of shifting the country’s capital wheneveranew king acceded to the throne.
Most of Myanmar’s military leaders are ethnic Burmese, but the military faces challenges by anti-government campaigns by armed ethnic minority groups. Those of Chinese and Indian descent control the country’s economy. The relocation of the capital can be viewed as signs that ethnic Burmese will never give the political initiative to other ethnic groups.
A Naypyidaw-based diplomat says, “High-ranking officials of Myanmar’s regime are not stupid. They madeareasonable and strategic judgment when they decided to shift the capital.”
In other words, it is probably appropriate to believe that Myanmar made the decision after considering various factors including fortune-telling.
The majority of members of pro-democracy forces in Myanmar are ethnic Burmese.
Pro-democracy forces in the country launchedageneral strike on Aug. 8, 1988, and Suu Kyi released her first message on the strike on Aug. 26. Two plus six is eight.
I asked Khin Maung Swe,aformer member of the Central Executive Committee of National League for Democracy led by Suu Kyi, if pro-democracy forces regard eight asalucky number.
He denied that saying, “Eight was regarded as an unlucky number in the dynasty era. Therefore, we wanted to use the figure eight many times to threaten the military regime.”
Suu Kyi laughed at the military regime’s obsession with the figure nine. However, pro-democracy forces’ use of the figure eight to fight against the government is also comical in the eyes of third parties. (By Takayuki Kasuga, Foreign News Department).
One Response to ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ – အပိုင်း (၂)
old worker on April 10, 2012 at 11:21 pm